सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने, अरु के- के मा बढ्दैछ ! - Dainikee News::
सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने, अरु के- के मा बढ्दैछ !
काठमाडौ, बैशाख १ । सरकारले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी बजेटमा सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने जानकारी दिएका हुन । यसवर्षको बजेट जेठ १५ भित्रै ल्याउने गरि सरकारले तयारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बजेट नबढाएकोमा आलोचित भएको सरकार यसवर्ष भारी मात्रामा वृद्धभत्ता बढाउने गृहकार्यमा लागेको हो । जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्यबिमा राष्ट्रिय अभियानको आइतबार काठमाडौमा शुभारम्भ र खोलौं बैंक खाता अभियान कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षाका हरेक क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुगेको बताउँदै असहायको सहारा सरकार हुने दाबी गरे ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, बैशाख १, २०७६ /Sunday, April 14th, 2019, 9:32 pm